Barroosinka: Bilaash, Fudud, Podcasting-Friendly-Friendly | Martech Zone
Khamiis, Maarso 29, 2018 Jimce, Maarso 30, 2018 Douglas Karr
Iyadoo barroosinka, waxaad si buuxda u bilaabi kartaa, wax uga beddeli kartaa, uguna maamuli kartaa Podcast-kaaga midig taleefankaaga ama desktop-kaaga. Barroosinka gebi ahaanba waa bilaash in la isticmaalo iyada oo aan la xadidayn keydinta. Isticmaalayaasha waxay ku qabsan karaan dhamaan codkooda barnaamijka anchor mobilada ama waxay ka soo rarikaraan dashboardkaaga khadka tooska ah.
Isku dar inta qaybood ee aad rabto qayb (tusaale ahaan, heesta dulucdaada, hordhaca, wareysiga martida, iyo farriimaha dhagaystayaasha qaarkood), adigoon sameynin tafatir horumarsan
Astaamaha barroosinka waxaa ka mid ah:
Wareeysiyada barroosinka - awood kuu siinaya inaad wicitaanada dibedda ka wacdo.
Qaybinta - si toos ah ugu qaybiso Podcast-kaaga barmaamijyada waaweyn ee Podcast-ka (oo ay ku jiraan Apple Podcasts iyo Google Play Music) hal guji oo keliya.
Ciyaaryahan gundhig ah - Haddii aad horey u haysatid baloog kuu gaar ah ama degel internet ah, waxaad si sahal ah ugu dhejin kartaa boodhkaaga halkaas si dadku u dhagaystaan ​​iyaga oo aan ka bixin goobtaada. Ka soo qaad koodhka galka ah astaantaada guud barnaamijka anchor mobilada ama dashboardkaaga anchor.fm.
Sacab Qof kasta oo dhegeysanaya Podcast-kaagaaga Anchor wuxuu bogaadin karaa daqiiqadaha uu jecel yahay. Sacabku waa mid joogto ah, sidaa darteed qof kasta oo hadhow dhegeysta wuxuu awood u yeelan doonaa (ikhtiyaar ahaan) inuu maqlo qaybaha dadka kale ku riyaaqeen.
Faallooyinka maqalka - Dhageystayaashu waxay u soo diri karaan farriimaha codka barnaamijkaaga wakhti kasta. Waxay heli doonaan ilaa hal daqiiqo inay ku soo jawaabaan, taasoo ka dhigeysa dhammaan fariimahaaga kuwo gaagaaban oo macaan.
Qoraal otomaatig ah - Barroosinka waxay tarjumaysaa codka loo soo raray barroosinka (wax ka yar 3 daqiiqo).
Fiidiyowyada Bulshada - markii aad rabto inaad ku dhiirrigeliso barnaamijkaaga 'Podcast' warbaahinta bulshada, 'Anchor' wuxuu soo saaraa muuqaal fiidiyoow ah, oo la duubay oo ah qaabka ugu wanaagsan ee barnaamij kasta. Waxay ku taageeraan barxadda Instagram, muuqaalka muuqaalka Twitter iyo Facebook, iyo sawirka Sheekooyinka.
Falanqaynta Podcast - Anchor, waxaad ku arki kartaa waxyaabo sida riwaayadahaaga waqti ka dib, sida dhacdooyinku isugu soo ururayaan midba midka kale, iyo barnaamijyada ay dadku u adeegsanayaan inay dhageystaan. Haddii dhagaystayaashaadu ay adeegsanayaan barnaamijka 'Anchor', xitaa waad arki kartaa qofka maqlay qayb kasta, iyo meeshii ay ugu sacaba tumeen ama uga faaloodeen.
Tags: barroosinkabarroosinka 3.0muuqaalada barroosinkabarroosin.fmpodcastingbarnaamijka Podcasting
Freshworks: Noocyo Kaladuwanaansho Isugeyn Isbadal Badan oo Hal Suite ah